Amaphupho ngomzimba – iAfrika
Amaphupho ngezitho zomzimba
Asho ukuthini amaphupho amayelana nezitho zomzimba? Lokhu kuhlanganisa amaphupho ngeminyaka yobudala, izingalo, umgogodla, izintshebe, izinqe, isifuba, amashiya, amehlo, ubuso, izinyawo, iminwe nezandla, izinwele, ikhanda, inhliziyo, imilenze, udevu, umlomo, izinzipho, ikhala, ukushefa, isikhumba, ukulala, indle nomchamo, kanye nesisindo.
Uma uphupha ukuthi uphuke umgogodla, kusho ukuthi uzohlulwa ngomunye umuntu emncintiswaneni noma emsebenzini. Kepha, uma umgogodla wakho unamandla futhi uqondile, kusho ukuthi ikusasa lakho linenjabulo.
Leli yiphupho elibhekene nabantu besifazane kuphela ngoba umuntu wesilisa akayi esikhathini. Lihle kakhulu kumuntu osuke ebhekene nenkinga noma izinkinga, libikezela ukudlula kulobo bunzima noma izingqinamba asuke ebhekene nazo. Imvamisa umuntu usuke engasiboni isixazululo futhi eselahle nethemba, kepha esikhathini esingeside isixazululo sisuke sizozifikela futhi aphume kuleyo nkinga kalula. Usizo lokuphuma kuleyo nkinga lusuke luzoqhamuka kumuntu obelungalindelwe … Read more
Tags Isikhathi, Ukuya esikhathini
Uma uphupha ukuthi unekhanda elikhulu uzoba nenhla
Uma uphupha ukuthi amashiya akho agcwele futhi ma
Uma uphupha ukuthi uyamele esifubeni somuntu noma
Uma uphupha ukhule intshebe uzoba nenhlanhla othan
Uma uphupha ukuthi uzacile noma siyehla isisindo sakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Kusho nokuthi ungalahlekelwa yimali ekusaseni lakho – ngakho-ke qaphela ukuthi uyisebenzisa kanjani nokuthi uyiboleka bani. Kodwa uma uphupha ukuthi uyisidudla kusho ukuthi uzolwa nophathina wakho.
Uma uphupha ukuthi ulele yishwa ngempela. Kodwa uma uvuka kusho ukuthi kukhona ozokutshela ukuthi uyakuthanda uphelelwe wusizi.
Uma uphupha ukuthi uyashefa kusho ukuthi udinga ukuqaphela abangani bakho ngoba kungenzeka ukuthi bakwenza isilima – ikakhulukazi mayelana nomuntu othandana naye. Uma uphupha ukuthi ushefa indawo ethize emzimbeni kusho ukuthi uzoba nenkinga lapho.
Uma uphupha ukuthi ukhule udevu kuzoba nokulwa ekusaseni lakho kodwa uzokwazi ukukulungisa konke uma nje wenza into elungile.
Uma uphupha ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu ubudlelwane bakho nomthandayo buzophela maduzane usale uphuke inhliziyo.
Uma uphupha ukuthi umuntu ukukhombisa izinqe zakhe ezinqunu kusho ukuthi kunamashwa azayo kuwe. Kungenzeka ukuthi kunomuntu ozama ukukuthakatha.
Uma uphupha ukuthi izingalo zakho ziphelelwe amandla kusho ukuthi kungenzeka uzizwe ungaphilile ezinsukwini ezizayo. Kodwa ke uma uphupha ukuthi izingalo zakho zinamandla uzozithola uthuthuka ungalindele.
Amaphupho ngeminyaka yobudala
Uma uphupha ukuthi usemusha kodwa ungasemusha kusho ukuthi uzogula maduzane. Uma usemusha uphupha ukuthi usugugile uzohlangabezana nobunzima empilweni yakho maduze nje.
Uma uphupha ukuthi isikhumba sakho sinezinduna kusho izinto ezinhle ngobudlelwane bakho nothandana naye. Uzohlangana nomuntu maduzane noma uzoba nenhlanhla nophathina wakho wamanje. Kodwa uma uphupha isikhumba sakho sisikwa kufanele uqaphele. Kusho ukuthi umuntu omethembayo kungenzeka abe yisitha.
Uma uphupha ukuthi imilenze yakho noma amadolo akho aphelelwa amandla uzoba namashwa ikakhulukazi uma uwa phansi ngenxa yalokho. Kodwa uma inamandla nawe uzoba namandla nempilo – ikakhulukazi uma ungowesilisa. Uma ungowesifazane ngenjwayelo kusho ukuthi umyeni wakho uzokunakekela futhi akuphathe kahle.
Ukuphupha ngomlomo kungasho izinto eziningi ezithinta impilo yakho kanye nabantu ophila nabo. Umlomo onukayo– lokho kusho ukuthi abantu sebephonsa ithawula ngawe ngenxa yezinto ozenzayo. Amazinyo – lokho kusho ukuthi uzomenywa endaweni ejabulisayo maduzane kodwa uma likhishwa izinyo kusho ukuthi uzolahlekelwa umngani. Umlomo ugxaza amathe – lokhu kusho ukuthi uzolahlekelwa yimali maduzane.